कसरी बित्छ राष्ट्रपति सीको नेपालमा १९ घण्टा ? « Naya Page
कसरी बित्छ राष्ट्रपति सीको नेपालमा १९ घण्टा ?
काठमाडौं, २४ असोज । अहिले नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमणको सबैभन्दा चर्चा छ । सी जिनफिङको स्वागतका लागि अहिले सरकारले सबैजसो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
सीको स्वागतका लागि काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानहरुको सिंगार पटारसँग उनको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी सरकारले गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउन लागेको राष्ट्रपति सीको आतिथ्यताका लागि सरकार अब व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । सी शनिबार नेपाल भ्रमणका लागि आउँदै छन् ।
सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेको २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखबाट यो खालको भ्रमण हुन थालेको हो । राष्ट्रपति सीले नेपालमा १९ घण्टा व्यतित गर्ने भएका छन् । यस अवधिमा विभिन्न भेटघाट र नेपाल–चीन विकासका विभिन्न विषयहरुमा छलफल र सम्झौताहरु हुने जनाइएको छ ।
–चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिबार बेलुकी ४ः३० बजेदेखि ५ः३० बजेको बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल ओर्लने छन् ।
–त्यसलगतै राष्ट्रपति सीले आफ्ना नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलविनासमा करिब ६ः३० बजे भेटवार्ता गर्नेछन् । सो अवसरमा दुई देशीबीचको सम्बन्धको विस्तारका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ ।
–करिब ७ः३० बजे राष्ट्रपति सीको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा उनी सहभागी हुनेछन् । रात्रिभोजसँगै उनको शनिबारको कार्यक्रम सकिने छ ।
–आइतबार बिहान नेपाल–चीनबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ । यस वर्तामा पर्यटन, प्रविधि, कृषि र बीआरआईका विविध पक्षमा छलफल हुने र बिहानको १०ः३० बजे द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्तार हुने प्रारम्भिक कार्यक्रम तय भएको छ ।
–यही बीचमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेतासहित राजनीतिक दलका नेताले भेटवार्ता गर्नेछन् । राष्ट्र सी नेपाली समयअनुसार १२ः३० बजे नेपालको दुई दिने नेपाल भ्रमण सकाएर करिब १२ः३० बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।